तीन करोड नेपालीलाई आयो खुशीको खबर : नयाँ सरकारले एक वर्षमै राजधानी तथा अन्या सहरको मुहार फेर्ने ल्यायो यस्तो योजना, साथमा भित्री रहस्य समेत देखियो यस्तो – PostKathmandu
तीन करोड नेपालीलाई आयो खुशीको खबर : नयाँ सरकारले एक वर्षमै राजधानी तथा अन्या सहरको मुहार फेर्ने ल्यायो यस्तो योजना, साथमा भित्री रहस्य समेत देखियो यस्तो
January 31, 2018 by PostKathmandu
काठमान्डौ,नेपाल नयाँ सरकारले एक वर्षमै राजधानी तथा अन्या सहरकोको मुहार फेर्ने योजना बनाएको छ ! नेपाललाई अब एक बर्षमा एक बिकशीत देस बनाउने भन्ने कुरामा मुख्य ध्यान दिएको छ !
केपीओलीको सरकार भए सँग संगै देसमा बिकासको कार्य सरु हुने उहाले बताउनु भएको छ ! देसमा नयाँ नयाँ प्रबिधिको बिकासले गति लिने उहाले बताउनु भएको छ !
यस्ता छन् केपी ओलीका पाँच योजना
२२ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कसैले सामान्य हाँसो ठट्टामात्र गर्ने नेताका रुपमा बुझेको छ भने त्यो गलत हुनेछ । ओली नेपाली राजनीतिका निकै चतुर खेलाडी हुन् ।
पछिल्लो समयमा सुशील कोइरालाको कमजोर नेतृत्व क्षमता र माओवादीको असफलतामा टेकेर ओली ‘राइटिष्ट’हरुको राजनेता बन्ने कोशिसमा लागेका छन् ।
आफू र आफ्नो दल नेकपा एमालेका लागि अनुकूल वस्तुगत परिस्थिति सिर्जना भएपछि अब एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सफलताका लागि उनी मुख्यतः पाँचवटा योजना एक-एक गर्दै पूरा गर्ने बाटोमा लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
पहिलो योजना : मुठभेड गरेर भए पनि माघ ८ मै संविधान
केपी ओली जसरी पनि माघ ८ मै संविधान जारी गराउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पार्टी नेताको हिसाबले आन्तरिक निर्देशन दिइसकेका छन् ।संविधानसभा नियमावलीले सभाध्यक्षलाई असीमित अधिकार दिएकै छ ।
त्यसमा पनि बाधा पुर्‍याउने नियमहरुलाई निम्बन गरेर सभाध्यक्षलाई असीमित अधिकार दिने र गडबडी गर्न खोज्ने अल्पमत सदस्यलाई मार्शल लगाएर भए पनि संविधान घोषणा गरी छाड्ने ओलीको अर्जुनदृष्टि देखिन्छ ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङ पनि ओली समूहकै भएकाले आफ्नो अभियानको मुख्य सारथी ओलीले नेम्वाङलाई नै बनाएका छन् । तर, यो योजनामा केही चुनौतीहरु अवश्य छन् ।
कांग्रेसभित्रैबाट सभामुख नेम्वाङलाई संविधानको मस्यौदा लेख्न नदिने आवाज उठ्नु र विपक्षीले संविधानसभामा पेल्न खोजिए भौतिक प्रतिकारको तयारी गर्नुले मार्शल मार्फत ‘सफ्ट कु’ गरेर माघ ८ मै संविधान बनाउने ओलीको योजना कार्यान्वयन हुन सजिलो छैन ।
दोस्रो योजना : आफ्नो अनुकूल प्रदेश बनाउने
केपी ओली संघीय प्रदेश र राज्य पुनसंरचनाको प्रश्नमा कुनै पनि हालतमा माओवादी र मधेसवादीसँग झुक्ने पक्षमा छैनन् । उनी आफूले अघि सारेका प्रदेशहरु र शासकीय स्वरुप अनुसारकै संविधान ल्याउन चाहन्छन् । देशभित्रको जनमत आफ्नो विचारको पक्षमा रहेको ओलीको बुझाइ छ । र, उनलाई बल दिने पक्ष पनि यही नै हो ।
आफू अनुकूलका प्रदेशहरु जारी गर्नका लागि ओलीले अपनाउन सक्ने विधि भनेको बहुमतीय प्रक्रिया नै हो । यसका लागि सहमतिको बाटो भन्दा बहुमत अल्पमतको विधिबाट अघि बढ्नु उनका लागि सुरक्षित यात्रा हुने छ ।
यसका लागि आवश्यक बहुमत पुगिसकेको र थप मत जुटाउने काम भइरहेको ओलीले बताउँदै आएका छन् ।तर, यो बाटोबाट अघि बढ्दा सहमतिको संविधान नबन्ने र हिन्दुवादी, जनजाति, मधेसवादी र माओवादीले आन्दोलन गर्ने अनि मुलुकको द्वन्द्व यथावत रहन गई शान्ति मुलुकमा र स्थायित्व कायम नहुने खतरा छ ।
प्लान सी- सुशीललाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने
केपी ओलीको तेस्रो योजना भनेको सुशील कोइरालालाई राजीनामा गराएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने हो । यसका लागि माघ ८ मै जसरी पनि संविधान जारी गर्न आवश्यक छ ।सुशील प्रधानमन्त्री हुने बेलामै एमाले र कांग्रेसवीच संविधान बनेपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । यही कारणले गर्दा केपी ओली हतारिएका छन् ।
तर, सुशीललाई राजीनामा गराएर आफू प्रधानमन्त्री हुन केपी ओलीलाई सजिलो छैन । माघ ८ मा संविधान नबने केही महिना कोइरालाले नै निरन्तरता पाउने छन् । अर्कातिर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने माओवादी र मधेसवादी दल लागि पर्ने छन् र उनीहरुलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने छन् । कांग्रेसको महाधिवेशन हुन लागेका बेला देउवाका लागि त्यो एउटा मौका बन्नेछ ।
आफू प्रधानमन्त्री भएर महाधिवेशनमा जाँदा देउवाले कांग्रेस सभापति आफ्नो हातमा पार्न सजिलो हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सुशील कोइरालाबाट उम्केको माछो देउवाका भागमा नजाला भन्न सकिँदैन ।
त्यो अवस्थामा दोस्रो दल एमाले संसदीय परम्पराअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बस्नुपर्ने हुन्छ र आगामी निर्वाचनमा पनि उसले कांग्रेसकै मातहतमा बसेर चुनाव लड्नुपर्ने हुन सक्छ ।
प्लान डी- झलनाथलाई राष्ट्रपति बनाउने
केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सुशील कोइरालालाई तपाई राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने भित्री प्रस्ताव राखेको चर्चा छ । तर, एमाले महाधिवेशनदेखि नै ओलीले झलनाथ खनाललाई ‘तपाई भावी राष्ट्रपति’ भनेर आश्वासन दिएको अवस्था छ ।
केपी ओली पूर्वसहमतिप्रति इमान्दार नेता होइनन् । त्यसो हुन्थ्यो भने माधव नेपाललाई संसदीय दलको नेता बन्न नदिन उनले एक पद एक व्यक्तिको नारा ल्याएका थिए ।
तर, अहिले उनी संसदीय दलको नेता वामदेवलाई हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन् । आफ्नै पूर्वअडान विपरीत उनी पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री तीनै पद आफैंमा केन्दि्रत गर्न चाहिरहेका छन् ।
यो स्थितिमा आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओलीले झलनाथलाई राष्ट्रपति बनाउन लविङ गर्छन् या सुशीललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँछन् भन्ने विषय निकै रोचक बन्ने छ । कोइराला र खनाल दुवै आफू राष्ट्रपति हुने लोभमा ओलीप्रति नतमस्तक रहँदै आएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ माधव नेपाल र सुवास नेम्वाङ पनि राष्ट्रपतिका लागि एमालेका योग्य दाबेदार हुन् ।
यो अवस्थामा कांग्रेसभित्रकै अन्तरविरोधमा खेल्दै ओलीले आफ्नै दलको नेतालाई शीतलनिवासमा व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।यद्यपि यो अवस्थामा सुशीललाई दिइएको वचन, देशको शक्ति सन्तुलन र आफैं प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने स्थिति आएमा ओलीको यो योजना कार्यान्वयन हुन गाह्रो पर्न सक्छ ।
प्लान ई- आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गर्ने, कांग्रेसलाई दोस्रोमा झार्ने
केपी ओलीको मुख्य मिसन भनेको संविधान बनेपछि हुने आम चुनावमा एमालेलाई पहिलो दल बनाउने र नेपाली कांग्रेसलाई खुम्चाएर दोस्रो दलमा झार्ने नै हो ।यो योजना सफल बनाउन ओली संविधान बनेपछिको पहिलो कार्यकारी प्रमुृख बन्न र एमालेकै नेतृत्वमा चुनावमा जान चाहन्छन् ।
तर, दोस्रो दलको नेतृत्वमा आम चुनावमा जान कांग्रेस नेताहरु राजी हुने अनुमान लगाउन गाह्रो छ । तर, ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुने स्थिति आयो भने पनि संयुक्त सरकारको गृहमन्त्रालय कांग्रेसको हातमा रहन सक्छ ।
संविधान बनेपछि हुने आम चुनाव राष्ट्रिय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलोृ दल कांग्रेसकै नेतृत्वमा चुनाव हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ र त्यसको नेतृत्व देउवाले गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
त्यो स्थितिमा पहिलो संविधानसभामा जस्तै तेस्रो शक्ति बनेको एमालेले घुमाई-घुमाई प्रधानमन्त्री चलाउने अवस्था उम्कने खतरा आउने छ ।
बेबी किङको योजना पूरा गर्ने तयारीमा केपी ओली, गिरिजाप्रसादको बाटो पछ्याउँदै
२०६३ सालमा राजनीतिले चामत्कारिक गतीमा बढिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किङको बारेमा चर्चा गरेका थिए। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै त फेरि अधिकार छाड्न सकिन्न तर राजाका नातीलाई उत्तराधिकारी बनाउन सकिने एउटा चर्चा स्वरुप उनले ‘बेबी किङ ’को अवधारणा फालेका थिए ।
अर्थात् राजसंस्था कुनै स्वरुपमा राख्न सकिन्छ की भन्नेमा उनको मनको अन्तरकुन्तरमा थियो की भन्ने आधार थियो। ज्ञानेन्द्र शाहले पटक पटक धोका दिएको कारण उनी तत्शाकालिन राजासँग भने रुष्ट थिए ।
गिरिजाले गणतन्त्रको घोषणा नहुन्जेलसम्म बेबी किङको प्रसङग कहि न कहि उठाए । यसका पछाडी घरेलु राजनीति सँगै थुप्रै अन्य कारण पनि थियो । काठमाडौंमा खासै नबोल्ने गिरिजाप्रसाद विराटनगर आफ्नो निवासमा पुगेपछि केही न केही तरङ्ग दिने क्रममा बेबी किङको प्रसङगमा बोलेका थिए । उनको त्यो भनाइ निकै चर्चित भयो ।
एकातिर राजावादीहरु गिरिजासंग आगो भए भने कम्युनिष्ट शक्तिहरु जतिसुकै सडकमा कुर्लिए पनि यथार्थमा राजसंस्थाप्रति थर्कमान थिए । पूर्वराजाले शाही शासन ल्याउँदा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने आशाले दरबारमा निवेदन हाल्न पुगेका थिए । त्यतिबेला एमालेपथमा खासै चर्चामा नरहेका हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझ बढी थर्कमान थिए ।
उनी रत्नपार्कदेखि लिएर रिङरोडमा शाही शासनको विरोध भइरहँदा ‘ट्याक्टरमा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नेहरु बिलाएर जाने’ ब्यङ्ग्य कसिरहन्थे । सम्भवतः नपत्याउने खोलाले बगायो ।
सशस्त्र द्धन्द्धमा होमिएको माओवादीले पनि कहिल्यै राजसंस्था ढाल्ने सोचेको थिएन ।कुनै समय माओवादीको राजसंस्थासंग नजिकको सम्वन्ध रहेको चर्चा बाहिर आउँथ्यो । हुनत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जोसंग पनि आफ्नो नजिकको सम्बन्ध रहेको जनाउँदै राजनीतिक शिखरमा छन् ।
अहिले केपी ओलीको हातमा एक किसिमले मुलुकको शक्ति छ । निर्वाचनमा एमालेले सर्वाधिक मत ल्याउनु अनि माओवादी केन्द्रसंग पार्टी एकता भए बहुमत प्राप्त पार्टी बन्नेछ र उसले चाहेका खण्डमा धेरैजसो इच्छा पूरा गर्नेछ ।केपी ओली र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका प्रतिनिधिबीच पटक पटक भेट भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहसंग बैंककमा उनको राम्रै वार्ता भएको जानकारहरु बताउँछन । ओली र हिमानी बिहिबारै नेपाल फर्कदैछन् ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि पुस २६ गते बैंकक गएका ओली मध्यान्ह १२ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लने उनको सचिवालयले जनाएको छ । हिमानी पनि सोही फ्लाइटमै आउँदै छिन् । ओलीले यसअघि नै पूर्व राजपरिवारलाई समेटेर लैजान सक्ने बताएका थिए । अब बहुमत प्राप्त पार्टी बनेमा र भारतको पनि चाहना मिलेमा मधेसवादी दलहरुको सहयोगमा केपी ओलीले संविधान संशोधनसम्म गर्न जोड दिनेछन् ।
बेबी किङ भनेर गिरिजाले भनेका पूर्वराजाका नाती हृदयेन्द्र किशोर भइसकेका छन् । उनलाई बेबी किङका रुपमा हेर्न सक्ने अवस्था रहेन । तर स्रोत भन्छ कि अब विकल्पमा रहेकी पूर्व युवराज्ञी हिमानीलाई कुनै स्थान दिन सकिन्छ । ओलीले त्यसलाई पूरा गर्नका लागि कुनै सम्झौता गरेका रहेछन् भने अन्यथा नसोचे हुन्छ ।
गिरिजाले त राजनीतिले कस्तो मोड लिने रहेछ भनी परीक्षण गर्नका लागि सो सयममा उक्त बोली बोलेका थिए । तर ओलीको बोली फरक हुन सक्नेछ । के स्वर्गीय गिरिजा प्रसादले राजनीतिक परिक्षणका लागि चालेको दाउ केपी ओलीले चाल्न खोजेको होलान त रु सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेसंगै ठाउँठाउँमा आगो बल्न थालेको छ ।
कतै यसमा राजावादीको पनि साथ रहे आगो भने अझै बढी जोडले बल्नेछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि भएको यो पहिलो पाइलामा नै केहि अप्ठ्याराहरु आएका छन्। तर यो अवस्थाका फाइदा उठाएर राजसंस्थालाई फर्काउन चाहनेहरु मुलुकलाई थप संक्रमणमा धकेल्न क्षमता राख्लानरु यो अवस्थामा पुग्नु भन्दा पनि सहज निकासको बाटोमा ओली उनीहरुको साथमा हुन्छनकी भन्ने आशंका भने व्याप्त छ।
हामीसँग क्षमता छ, योजना छ : केपी ओली
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका कारण जनताले संविधान पाएको जिकिर गर्दै अब त्यसको रक्षा गर्न एमाले मात्र प्रतिबद्ध भएको बताउनुभएको छ ।कमल गाउँपालिका वडा नं ५ को पाडाजुङीमा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दैै ओलीले भन्नुभयो, “हामीसँग क्षमता छ, योजना छ , एमालेले अब विकासको मुहार पूर्वबाट नै सुरुआत गर्नेछ ।”
उहाँले संविधानलाई कुल्चेर अधिकारका नाममा कसैलाई पक्षपोषण गर्ने तथा देशलाई अहित हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । गौरादहमा आज नै आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता ओेलीले देशमा एमालेको विकासप्रतिको चाहनालाई जनताले अब मतदानबाट प्रमाणित गर्ने जिकिर गर्नुभयो । kamananews बाट साभार
Prevपल र आँचलले मिडियाप्रति पोखे आक्रोश || ‘बरु म फिल्म नै खेल्दिंन’ आँचल
NextBREAKING NEWS.. ७ दिन देखि हराएका जोन तामाङ फेला परे…यसरी नेपाली सेनाले पत्ता लगायो।